Camcorder Iweghachite - Olee otú naghachi camcorder video ndia
> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Video faịlụ site camcorder
Enyemaka! Mkpa camcorder video mgbake!
M na-ezighị ehichapu m video anya nke m ike mbanye camcorder. Nke ahụ bụ ihe ndekọ nke m nwa amụrụ ọhụrụ nwa. Nwunye na-aga igbu m! M nwere ike nweta ọ laghachi azụ !!
The ihe mbụ i kwesịrị iburu n'uche bụ: Ejila ọhụrụ ọ bụla videos na gị camcorder mgbe ị hapụ vidiyo si na ya, ma ọ bụ gị furu efu videos ga-overwritten na-apụghị azụ ọzọ.
Nke ahụ bụ n'ezie mwute ida ndị dị oké ọnụ ahịa videos, karịsịa banyere ndị ezi-echeta na-apụghị azụ ọzọ. Ee, camcorder mgbake nwere ike inye gị ụtọ aka reecover ehichapụ vidiyo si na camcorders, ma ịchọta a ọkachamara na mma-otu bụ na mfe. E nwere ọtụtụ mgbake ngwaọrụ-etu ọnụ banyere otú mfe na ike nke na omume ha nwere ike naputa niile furu efu faịlụ. Iji nweta onye na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ị chọrọ, anyị ji obi umeala na-akwado gị Wondershare Photo Recovery. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X, i nwere ike iji Wondershare Photo Recovery for Mac. Olee otú ime ka n'aka na nke a mgbake nwere ike ime nke ọma n'ihi na gị? E nweghị ụzọ mma karịa na-agbalị ya onwe gị. Practice mgbe niile nwere ike ikwu ihe niile.
Free download nri version nke Wondershare camcorder data mgbake igbu ịchọta azụ gị furu efu vidiyo si na camcorder tupu akwụ.
Nke a foto mgbake nwere ike naputa vidiyo si na camcorder nke ụdị ọ bụla:
• Naghachi data si Canon camcorder
• undelete vidiyo si na JVC camcorder
• weghachite vidiyo si na Panasonic camcorder
• Weghachi data si Sony camcorder
• Rcover video faịlụ site na Samsung camcorder
• weghachite data si camcorders nke ọzọ ụdị
Olee otú naghachi ehichapụ vidiyo si na camcorders?
Free download na wụnye foto mgbake na kọmputa gị. Ebe a ka na-ahụ camcorder video mgbake na Windows version na zuru ezu nzọụkwụ.
Step1. Họrọ camcorder ka iṅomi
Jikọọ gị comcorder na kọmputa na a kaadị agụ ma ọ bụ eriri USB. Ha abụọ bụ ndị OK. Gbaa ndị Photo Recovery na iti na "Malite". Ebe i nwere ike ịhụ gị camcorder ahụrụ site software. Họrọ ya na pịa ka "iṅomi".
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ gị camcorder depụtara ebe a, ị nwere ike "Nwee Ume draịva" ka usoro ihe omume ịchọpụta ya. Ka na-adịghị, ị kwesịrị ị ego ma na kọmputa nwere ịchọpụta gị camcord ma ọ bụ. Bụrụ na ọ bụghị, i kwesịrị jikọọ ha ọzọ.
Ọzọkwa, i nwere ike iji "iyo Nhọrọ" ka faịlụ ụdị na ị chọrọ iji naghachi n'aka gị comcorder, dị ka photos, vidiyo ma ọ bụ audio, na ọbụna banyere formats.
Step2. Malite naghachi camcorder video faịlụ
Mgbe Doppler, ọ bụ oge maka comcorder video mgbake. Niile faịlụ recoverable na-depụtara na scanning n'ihi na a haziri nke ọma faịlụ ụdị. Ego na-agbake ndị dị gị mkpa.
Otu ihe ga-akwụ ụgwọ anya na: Unu na-agbalị ịzọpụta Natara faịlụ gị camcorder si kaadị ma ọ bụ ike mbanye ebe ị furu efu ha. -Esi na ha a ebe ọhụrụ dị ka kọmputa na diski ike ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga ngwaọrụ.
Ihe ikpeazụ, n'ihi na mgbaka nke ị na-elele vidiyo na camcorder ma ọ bụ igwefoto, ọ dị mma na nkwado ndabere na mpaghara ha na kọmputa gị na-ekiri, na hiere ụzọ Ihichapụ ga-erughị.